नलगाड जलविद्युतका लागि छुट्याएको रकमले मुआब्जा दिनै नपुग्ने - Dainikee News::
नलगाड जलविद्युतका लागि छुट्याएको रकमले मुआब्जा दिनै नपुग्ने
जाजरकोट, जेठ ३० । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा ४१० मेगावाटको नलगाड जलविद्युत् आयोजनाका लागि नाम मात्रको बजेट विनियोजन गरेको स्थानीयवासीले गुनासो गरेका छन् ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेष्ठ ३०, २०७५ /Wednesday, June 13th, 2018, 11:27 am
किष्ट मेडिकल कलेज अवैध शुल्क उठाउदै
शिक्षकले पाइपले टाउकामा हिर्काउँदा विद्यार्थी आईसीयुमा भर्ना !
सुदर्शनसँग २२ वटा सिमकार्ड !
बेरोजगारी समस्या अन्त्य गरिन्छ : मन्त्री पण्डित
सम्मेलनलाई लक्षित गरी बढाइयो सुरक्षा सतर्कता